Waxyaabihii laga diiwaan geliyey kulankii xalay ay kooxda Manchester City ku hanatay tartanka FA Cup-ka – Gool FM
(Manchester) 19 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xalay hanatay tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay nus-darsan goolal ah ku xaaqday naadiga Watford.
Kulankii Final-ka ahaa ee tartankan oo ka dhacay garoonka Wembley ayey Manchester City 6-0 uga adkaatay kooxda Watford, waxaana kooxda Pep Guardiola goolasha kulankan u kala dhaliyey David Silva, Sterling (Saddexleey), Bruyne iyo Jesus.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa waxyaabihii xiisaha badnaa ee laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- David Silva ayaa soo gabagabeeyey 27 kulan oo uusan wax gool ah u dhalin kooxda Manchester City tartammada oo dhan, kaddib 34 shuud oo uu sameeyey iyo 2066 daqiiqo oo uu ciyaaray, markii ugu dambeysay oo uu shabaqa soo taabtana waxa ay ahayd kulan ay ka horjeedeen kooxda Southampton 30 bishii December.
>- Sterling ayaa noqday ciyaaryahankii afaraad oo saddexleey ka dhaliya Final-ka FA Cup-ka kaddib William Townley oo u dhaliyey Blackburn sanadkii 1890-kii, Jimmy Logan oo u dhaliyey Notts County sanadkii 1894-kii iyo Stan Mortensen oo u dhaliyey Blackpool sanadkii 1953-kii.
>- Man City ayaa noqotay kooxdii ugu horreeyey ee Ingiriis ah oo hal xilli ciyaareed ku wada guuleysata saddexda koob ee laga dhigo gudaha Ingiriiska ee Premier League, FA Cup iyo League Cup.
>- Manchester City ayaa noqotay kooxda saddexaad ee taariikhda lix gool dhalisa Final-ka FA Cup-ka kaddib Bury 6-0 Derby, sanadkii 1903 iyo Blackburn 6-1 The Wednesday, sanadkii 1890-kii kulankaasoo ka dhacay Kennington.
>- Manchester City ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee Ingiriis ah oo guuleysata taariikhda 50 kulan hal xilli ciyaareed tartammada oo dhan, waxaana ay lix dheer yihiin intii ay sameeyeen xilli ciyaareedkii 2017-18.
>- Pep Guardiola ayaa ka mid noqday kaliya saddex tababare oo Spanish ah oo ku guuleystay tartanka FA Cup-ka, kaddib Rafael Benítez oo qaaday 2006 iyo Roberto Martínez oo hantay 2013-kii.
PSG oo diyaar u ah De Gea, Kante oo rabitaan loo muujiyay, Arsenal oo qiimo yar ku dooneysa Zahta & Wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.